ငါးမန်းတွေ ဟာ လင်းပိုင်တွေ ကို ဘာကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြ ပါသလဲ?? – Let Pan Daily
ငါးမန်းတွေ ဟာ လင်းပိုင်တွေ ကို ဘာကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြ ပါသလဲ??
လင်းပိုင်တွေဟာ အုပ်စုဖွဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြပြီး ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ ရေနေနို့တိုက် သတ္တဝါ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ငါးမန်းတွေရဲ့သဘာဝက တစ်ကောင်တည်းနေတတ်ကြပြီး သားရဲတိရစ္ဆာန်အမျိုးအစားပါ။ ငါးမန်းတွေဟာ လင်းပိုင်အုပ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာ ရှောင်သွားတတ်ကြပြီး အထူး သဖြင့် Grampus dolphin နဲ့ Killer whales များကို ပိုပြီးကြောက်ကြ ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ရက်စက် တတ်တဲ့ ငါးမန်းတွေက နှစ်လိုဖွယ်အသွင် နဲ့ လင်းပိုင်တွေကို ကြောက်ရတာလဲ လင်းပိုင်တွေ ဟာ ငါးမန်း ကိုတွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်းဆိုသလို အုပ်စုလိုက်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ ဒါက ငါးမန်းတွေက လင်းပိုင်တွေကိုရှောင်ရှားကြတဲ့အဓိကအချက်ပါပဲ။ လင်းပိုင်တွေဟာ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့ အပြင် သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်ပုံကြောင့် အခြားသော အားသာချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ လင်းပိုင်တွေရဲ့ အပေါ်ဖက်ရေယပ်ဟာ နှူးညံ့တဲ့အရေပြားနဲ့
ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့် သားကောင်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာ အတော်မြန်ပါတယ်။ လင်းပိုင်တွေရဲ့ ဒေါင်လိုက်အမြီးကြောင့် ရေကူးတဲ့အခါမှာ မြန်ဆန်စေပြီး direction ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်း မြန်စေပါတယ်။ ခေါင်းဖက်မှာရှိတဲ့အရေပြားဟာ ထူပြီး သန်မာတာကြောင့် ငါးမန်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့နှုတ်သီးနဲ့ အရင်ဆုံး ငါးမန်းရဲ့ ပါးဟပ်ကို တိုက်လိုက်ပါတယ်။ နောက်မှ ငါးမန်းရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကို အားပြင်းပြင်းတိုက်ခိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့တိုက်ခိုက်ခြင်းဟာ ငါးမန်းကို သေစေနိုင်လောက်တဲ့အတွင်းဒဏ်ရာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လင်းပိုင်းအမျိုးအစားတွေထဲမှာ အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Killer whale တွေဟာ စားစရာရှားတဲ့အခါမှာ white shark တွေကို အမဲလိုက်တတ်ကြပါသေးတယ်။
လင်းပိုင်တွေ့ အမြဲအုပ်စုနဲ့သွားလာနေထိုင်ကြပြီး အချင်းချင်းစည်းလုံးပါတယ်။ တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် ကူညီတတ်ကြတဲ့သဘာဝလည်းရှိပါတယ်။ ငါးမန်းတွေဟာ အကောင်ကြီးတဲ့ လင်းပိုင်တွေထက် အကောင်သေးတဲ့ လင်းပိုင်ငယ်လေးတွေကို ပစ်မှတ်ထားကာ တိုက်ခိုက်ချင်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် လင်းပိုင်ငယ်လေးတွေ ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အခါမှာ အခြားသောလင်းပိုင်အုပ်က ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့် မလွတ်နိုင်ပါဘူး။ လင်းပိုင်တွေရဲ့အကြီးဆုံးအားသာချက်ကတော့ ဉာဏ်ကောင်းနေတာပါပဲ။ ရေထဲက ငါးမန်းရဲ့ အသံလှိုင်းရွေ့လျားတာကို အာရုံခံပြီး ရှောင်သွားတာ၊တိုက်ခိုက်တာတွေကို ပြုလုပ်ပါတယ်။
ငါးမန်းတွေကပဲ လင်းပိုင်တွေကိုကြောက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ Florida မှာနေထိုင်တဲ့ လင်းပိုင်တွေ ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ငါးမန်းနဲ့ တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ဒဏ်ချက်တွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လင်းပိုင်တွေအတွက်လည်း ငါးမန်းတွေက ကြီးမားတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ခုပါပဲ။
ငါးမနျးတှေ ဟာ လငျးပိုငျတှေ ကို ဘာကွောငျ့ကွောကျရှံ့ကွ ပါသလဲ??
လငျးပိုငျတှဟော အုပျစုဖှဲ့စုပေါငျးနထေိုငျကွပွီး ဉာဏျကောငျးတဲ့ ရနေနေို့တိုကျ သတ်တဝါ အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ။ ငါးမနျးတှရေဲ့သဘာဝက တဈကောငျတညျးနတေတျကွပွီး သားရဲတိရစ်ဆာနျအမြိုးအစားပါ။ ငါးမနျးတှဟော လငျးပိုငျအုပျကိုမွငျတဲ့အခါမှာ ရှောငျသှားတတျကွပွီး အထူး သဖွငျ့ Grampus dolphin နဲ့ Killer whales မြားကို ပိုပွီးကွောကျကွ ပါတယျ။
ဘာကွောငျ့ ရကျစကျ တတျတဲ့ ငါးမနျးတှကေ နှဈလိုဖှယျအသှငျ နဲ့ လငျးပိုငျတှကေို ကွောကျရတာလဲ လငျးပိုငျတှေ ဟာ ငါးမနျး ကိုတှတေ့ာနဲ့ ခကျြခငျြးဆိုသလို အုပျစုလိုကျတိုကျခိုကျကွပါတယျ။ ဒါက ငါးမနျးတှကေ လငျးပိုငျတှကေိုရှောငျရှားကွတဲ့အဓိကအခကျြပါပဲ။ လငျးပိုငျတှဟော ဉာဏျရညျမွငျ့မားတဲ့ အပွငျ သူတို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ တညျဆောကျပုံကွောငျ့ အခွားသော အားသာခကျြတှလေညျး ရှိပါတယျ။ လငျးပိုငျတှရေဲ့ အပျေါဖကျရယေပျဟာ နှူးညံ့တဲ့အရပွေားနဲ့
ဖှဲ့စညျးထားတာကွောငျ့ သားကောငျကို တိုကျခိုကျတဲ့အခါမှာ အတျောမွနျပါတယျ။ လငျးပိုငျတှရေဲ့ ဒေါငျလိုကျအမွီးကွောငျ့ ရကေူးတဲ့အခါမှာ မွနျဆနျစပွေီး direction ပွောငျးတဲ့အခြိနျမှာလညျး မွနျစပေါတယျ။ ခေါငျးဖကျမှာရှိတဲ့အရပွေားဟာ ထူပွီး သနျမာတာကွောငျ့ ငါးမနျးကိုမွငျတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့နှုတျသီးနဲ့ အရငျဆုံး ငါးမနျးရဲ့ ပါးဟပျကို တိုကျလိုကျပါတယျ။ နောကျမှ ငါးမနျးရဲ့ ဝမျးဗိုကျကို အားပွငျးပွငျးတိုကျခိုကျတတျကွပါတယျ။ ထိုကဲ့သို့တိုကျခိုကျခွငျးဟာ ငါးမနျးကို သစေနေိုငျလောကျတဲ့အတှငျးဒဏျရာကို ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ လငျးပိုငျးအမြိုးအစားတှထေဲမှာ အပါအဝငျဖွဈတဲ့ Killer whale တှဟော စားစရာရှားတဲ့အခါမှာ white shark တှကေို အမဲလိုကျတတျကွပါသေးတယျ။
လငျးပိုငျတှေ့ အမွဲအုပျစုနဲ့သှားလာနထေိုငျကွပွီး အခငျြးခငျြးစညျးလုံးပါတယျ။ တဈကောငျနဲ့တဈကောငျ ကူညီတတျကွတဲ့သဘာဝလညျးရှိပါတယျ။ ငါးမနျးတှဟော အကောငျကွီးတဲ့ လငျးပိုငျတှထေကျ အကောငျသေးတဲ့ လငျးပိုငျငယျလေးတှကေို ပဈမှတျထားကာ တိုကျခိုကျခငျြကွပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ လငျးပိုငျငယျလေးတှေ ကို တိုကျခိုကျတဲ့ အခါမှာ အခွားသောလငျးပိုငျအုပျက ဝိုငျးဝနျးတိုကျခိုကျတာကွောငျ့ မလှတျနိုငျပါဘူး။ လငျးပိုငျတှရေဲ့အကွီးဆုံးအားသာခကျြကတော့ ဉာဏျကောငျးနတောပါပဲ။ ရထေဲက ငါးမနျးရဲ့ အသံလှိုငျးရှလြေ့ားတာကို အာရုံခံပွီး ရှောငျသှားတာ၊တိုကျခိုကျတာတှကေို ပွုလုပျပါတယျ။
ငါးမနျးတှကေပဲ လငျးပိုငျတှကေိုကွောကျရတာမြိုးမဟုတျပါဘူး။ Florida မှာနထေိုငျတဲ့ လငျးပိုငျတှေ ရဲ့ကိုယျပျေါမှာ ငါးမနျးနဲ့ တိုကျခိုကျထားတဲ့ ဒဏျခကျြတှကေို တှရေ့တတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လငျးပိုငျတှအေတှကျလညျး ငါးမနျးတှကေ ကွီးမားတဲ့ခွိမျးခွောကျမှု တဈခုပါပဲ။
သား ယောကျြားလေး (၁၃) ယောကျ မှေးထားပမေယျ့ သမီးမမှေးမခငျြး ကလေးထပျယူဦးမယျ ဆိုတဲ့ စုံတှဲ
ကိုဗဈရှတေ့နျး တိုကျစဈမှူးတှေ ရဲ့ နှမျးလြ အိမျအပွနျ ခရီး
အိမျရှေ့ အမှေးတိုငျ ထှနျးခွငျး (သို့) နာနာဘာဝတှေ ကို ဖိတျချေါ နတေဲ့ အယူအဆ တခု
Breaking News! အောင်လအန်ဆန် မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့